Maitiro Ekuita Emairi Ekusvitsa Emails Kuti Uwane Mamwe Akanaka Mhinduro | Martech Zone
Maitiro Ekuita Emairi Okusvitsa Kwako Kuti Uwane Mamwe Akanaka Mhinduro
Svondo, Gunyana 30, 2018 Svondo, Gunyana 30, 2018 Antonija Božičković
Mumwe mushambadzi anoziva kuti vatengi vemazuva ano vanoda ruzivo rwemunhu; kuti ivo havachisiri kugutsikana nekungova imwe nhamba pakati pezviuru zvemarekodhi ekunyora. Muchokwadi, iyo McKinsey yekutsvaga kambani inofungidzira kuti kugadzira iyo zvakasarudzika ruzivo rwekutenga inogona kusimudzira mari kusvika pamakumi matatu muzana. Nekudaro, nepo vatengesi vangave vachiita iko kuedza kugadzirisa kwavo kutaurirana nevatengi vavo, vazhinji vari kukundikana kutora nzira imwecheteyo yeemail yavo yekusvitsa tarisiro.
Kana vatengi vari kutsvaga zvemunhu, zvinogona zvine musoro kufungidzirwa kuti vanokurudzira, mabloggi, uye varidzi vewebhusaiti vachange vachitsvaga chiitiko chakafanana. Kuita munhu wega kunonzwika semhinduro yakapusa yekuvandudza mhinduro, handiti? Chokwadi. Asi kusarudzika muemail kusvika kune kwakasiyana zvakanyanya nekusarudzika mukutengesa kwevatengi, uye ndosaka vamwe vatengesi vangasaone budiriro yakajeka.
Mukushambadzira kwevatengi, vashambadzi vangangove vakagovanisa avo vavanosangana navo uye vagadzira sarudzo diki dzeemail kukwidza kune wese anogamuchira mukati meboka iro. Mune mishandirapamwe yekusvikira, zvisinei, chikamu cheboka hachina kukwana. Makomba anofanirwa kuve akasarudzika pane imwe nhanho yemunhu kuve nezvinodiwa uye zvakaringana mhedzisiro uye izvi, zvokwadi, zvinoreva kuti panodiwa tsvagiridzo yepamusoro.
Kukosha kwekutsvagisa mukuparadzira
Zvinogona kuve zvakaomesesa - kana zvisingaite - kuti ubudirire kugadzirisa dhizaini usati waita zvakadzama kutsvagurudza kutanga. Kutsvagisa kwakakosha, kunyanya panguva iyo yaimbove Musoro weGoogle weWebhu Spam Matt Cutts iri kukurukura nezvevaenzi blogging ichive 'inowedzera spammy tsika'. Blogger vari kutsvaga zvimwe; kune vanhu vakanyatsoisa simba kuti pfungwa dzavo dzinzwikwe.
Nekudaro, 'kutsvagisa', mune ino chiitiko, hakusi kungoziva zita remumwe munhu uye nekukwanisa kuyeuka musoro wenyaya yazvino blog post; ndezvekutsvagisa maitiro emubatsiri wako epamhepo, zvavanofarira, uye zvavanofarira mukuda kuita ... pasina kuita senge yakawandisa seinternet stalker, hongu!
4 Nzira dzeKugadzira Emails Eko neKutsvaga
Kana zvasvika pakushambadzira uye nekuita yakasimba uye yakakosha maonero ekutanga, zvakakosha kuti vashambadzi varege kuwira mumusungo wekuita zvakajairika. email kushambadzira zvikanganiso. Mapango akasarudzika anogona kunge akaoma kuti uwane kurudyi, asi aya matipi mana ekugadzirisa maemail ekusvitsa anogona kuvandudza mikana yekubudirira:
Gadzirisa yako Yenyaya Mutsetse - Nzvimbo yekutanga yekutanga ine yako email chinyorwa mutsara. Kutsvagurudza kunoratidza kuti munhu wenyaya wenyaya mutsara anogona wedzera yakazaruka mitengo ne50%, asi ndeipi nzira yepamusoro yekuwedzera kubata kwekubata musoro wako? Muchiitiko ichi, zvakanangana nezvekusimudzira kwemunhu pane kutungamira kuita kwako pachako. Kungo wedzera zita remugashiri kune yako yenyaya mutsetse haisi kuzocheka. Muchokwadi, izvi zvinogona kuita tsika inokuvadza sezvo yakurumidza kuve zano rakajairika rinoshandiswa nemakambani anotumira maemail ekutengesa asina kukumbirwa. Panzvimbo iyoyo, edza kutarisisa padivi rekusimudzira rezvinhu; kufarira kunanga. Spin zvemukati mazano kuti usangane niche yemugashiri, uye yeuka: iyo mazwi maviri ekutanga yechero mutsetse wenyaya ndiwo akakosha! Mufananidzo sosi: Neil Patel
Ziva Dzimwe Mikana dzeKuita Iwe Munhu - Iyo yenyaya mutsara haisiriyo yega nzvimbo panokwanisika kuwedzera yekubata kweyemunhu kune yakadzika. Funga kana paine mimwe mikana yekugadzirisa pombi yako kuti ubate zvirinani nemutengi. Ino ndiyo nguva yekunyatso kubatika mukati mekutsvaga. Semuenzaniso, hapana chaicho chisarudzo chepasirese pane zvemukati mhando. Nepo vamwe vachisarudza kuona zvinyorwa, vamwe vanosarudza infographics uye mamwe maonero edata, vamwe vanosarudza mifananidzo nemavhidhiyo, vamwe vanosarudza imwe yekuburitsa fomati. Anogashira anofarira chii? Ehezve, chero hukama hunosanganisirwa mudura kune rako basa rinofanirwa kuve zvinoenderana nezvinodiwa neanogamuchira, uye edza kubatanidza mamwe mazwi avo uye matauriro ezwi mune zvako zvemukati. Mufananidzo Unobva: Kupara mhosva
Enda Kumusoro nekuPfuura - Dzimwe nguva, matipi 1 ne2 chete zvakaringana hazvikwani kupa tarisiro yekusvikira nehunyanzvi hwakazara. Zvinogona kunge zvichidikanwa kuti uende pamusoro uye kupfuura kuti unyatsobuda. Funga nezve kunongedzera kune akakodzera machira pamablog ayo iwo anenge achigamuchira akananga akanongedzera kwazviri munguva yakapfuura, kana kunyangwe kureva kune avo pachavo mablog mablog mukuyedza kurondedzera kwavo kwavanoona nemaonero ako. Pamwe kunyange kuita kurudziro yezvimwe zvinyorwa kuti vangave vanofarira zvichibva pamaitiro avo epamhepo nezviito. Kana iye anogamuchira achishandisa yakawanda yekuona kuti vawane poindi yavo, tevedzera izvi mudhara. Iko kushandiswa kwema screenshots akakodzera, semuenzaniso, kunogona kumanikidza iye anenge achigamuchira kuti anyatsoteerera.
Gadzira Zvakawanda Zvishandiso Zvinowanikwa - Iko hakuna kuramba kuti kusarudzika kweumwe neumwe mugashiri - zvinopesana neyakagadziriswa ezvikamu zvevatengi - - zvinotora kuyedza kwakawanda uko vashambadzi vazhinji vasina nguva yavo. Izvi hazvireve kuti mapango eemail haakwanise kuitwa munhu. Muchokwadi, maemail anogona kuve akasarudzika uchishandisa ekushambadzira maturusi ayo anoomesa akawanda maitiro eichi chiitiko. Zvishandiso izvi zvinogona kubatsira kuziva blogger zvido kuburikidza nekuwongorora zvemukati, pamwe nekuteedzera ese ari mukati uye anobuda kutaurirana kuti vagone vashambadzi kuti vakurumidze uye nyore kudzosera kumashure kune nhaurwa dzekutanga. Mune zvimwe zviitiko, zvinodikanwa kushandisa maturusi aya aripo kuona kuti mushandirapamwe wekusvitsa vanhu urikuramba uchifamba mushe.
Kuwana Balance Yakakodzera
Zano rekupedzisira rinobatsira pamusoro, nepo richiri kubatsira, rinovhura gaba hombe remakonye. Kuita munhu chinhu chakasarudzika uye chinhu chega, uye kuumba hukama hwakasimba hwevanhu nehusiku kazhinji haugone kubudirira kubudikidza nemuchina wega. Kutsvaga chiyero chakaringana pakati penyaya yekuisa uye yekuwedzera otomatiki kiyi yekugadzira yakasarudzika mapaki anokurudzira, kuita, uye kushandura.
Tags: eEmail Zvemukatiemail kusvikatsambambozha personalizationemail nenamooutreachpr emailpr kusvikapr pitchkufambidzana neruzhinjiparuzhinji hukama pombi
Antonija inyanzvi yekushambadzira internet paPoint Visible, inoshambadzira agency inopa chinongedzo chekuvaka uye dhijitari kushambadzira masevhisi. Iye ane kufarira kukuru mukushambadzira kwedhijitari uye nzvimbo yakapfava ye graphic dhizaini. Haatomboneta nekutsvaga kukurudzira kutsva, kuteerera mimhanzi yake yaanofarira uye kugadzira mifananidzo yedhijitari.
Vhidhiyo Chat Iri Kuenda Kwakanyanya KweMakambani Webhusaiti uye Ecommerce Mapuratifomu
Ndeapi Akanyanya Kukosha Mazuva Ano Ekushambadzira Unyanzvi muna 2018?